Bathuka izanya abahlaselwe yiqembu lemigulukudu - Ilanga News
Home Izindaba Bathuka izanya abahlaselwe yiqembu lemigulukudu
Kuthiwa ziwuhlalise lubhojozi umphakathi
Isale iphahlake amafasitela imoto kaDkt Thobile Masilela emuva koku-hlasela kweqembu lezigelekeqe.
USINDE ngeNkosi umndeni kadokotela wasoSizweni, eNewcastle uhlaselwa yiqembu lemigulukudu yabafana bendawo elizibiza ngeLast Warning, ebelihamba lihlasela emizini yabantu kule ndawo ngoba lithi liyaziphindisela ngokugwazwa kulimale omunye wabo kade besendaweni yokucima ukoma.
UDkt Thobile Masilela waseMadadeni Hospital, uthi namanje akazi ukuthi basinde kanjani nonina ngesikhathi kungena le migulukudu bezilalele kubo entathakusa yangeSonto.
Uthi bezwe kunomsindo komakhelwane, kukhalwa kanti ngaleso sikhathi le migulukudu ibihamba ingena umuzi nomuzi ishaya amawindi.
“Umama ulunguze ngewindi kanti besebevele sebesegcekeni lapha ekhaya, sebephihliza amawindi nomnyango. Sivukile sonke sazama ukubavimba ukuba bangangeni endlini kanti omunye wabo uphethe ucelemba nommese abephihliza ngakho amawindi, wangena ngaphakathi wagwaza umama.
“Ngizamile nami ukumqanda kanti ngizolimala ezandleni. Basuke lapho bayophihliza izimoto zami, iJaguar ne-Avanza, bazishaya wonke amawindi bazama nokuzivula isicabha,” kusho uDkt Masilela.
Unina, uNkk Thembi Masilela, uthi uze wadedelwa namhlanje esibhedlela. Uthi amaphoyisa ayile kwakhe eyobhalisa icala ngokulimala kwakhe, amnika iphepha okufanele liyosayinwa ngudokotela mayelana nokulimala kwakhe.
“Ngesaba ngisho ukuphuma lapha ekhaya ukuyokwenza leyo nto ngoba hleze bangibone laba bafana, bangiqedele. Izimoto zendodakazi yami zife zonke, kangazi ukuthi kwalapho kodokotela ngizoya ngani. Sibonga khona nje ukuthi kasiphumanga isidumbu ngendlela ebezinolaka ngayo lezi zigelekeqe,” kusho uNkk Masilela.
Uthi le migulukudu iphume kubona yangena komunye umuzi wakwaShabalala yashaya isalukazi sakhona nekhehla ngezitini emakhanda.
UNkz Khanyisile Vilakazi naye obeyisisulu sale migulukudu, uthi kubona ifike yashaya wonke amawindi yacanda nesicabha. Uthi idlulele emakamelweni angemuva, yaphihliza umabonakude nesibuko.
“Le migulukudu isisikhathazile la endaweni, kasisazi ukuthi senzeni. Ungqongqoshe uke wafika la wazama ukubakhuza kodwa le nto siyibona iqhubeka,” kusho uNkk Vilakazi.
UMnu Thami Nzuza ongumsunguli weSekwanele Organisation elwa nalobu bugebengu emphakathini, uthi kunamaqembu amabili okuyiJuvenile neLast Warning, alwayo.
“IJuvenile okuyiyona enodlame kakhulu, ephethwe ngabantu abebesejele besemaqenjini ama-26 nama-28, sesikhulumile nayo yasho ukuthi kwayona kayisafuni ukuhlukumeza umphakathi, ithi izikhali isizozibeka phansi.
“Besizoba nomhlangano ngeSonto neLast Warning kanti sekuzokwenzeka lokhu kuzosa kube yiSonto. Abakushoyo laba bafana bathi kukhona namaphoyisa abasebenzisana nawo abadayisela izidakamizwa kanti kunabelaphi bendabuko ababanika amabhande nentelezi ebenza babenesithunzi.
“Besicela ungqongqoshe wamaphoyisa asisize, asilethele amasosha azogada la endaweni ngoba abantu kabaphephile. Sicela aphinde asilekelele siwumphakathi kuphenywe la maphoyisa abathi abanikeza izidakamizwa ezibenza bevuke indlobane uma bengazitholile,” kusho uMnu Nzuza.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe akhona amacala aphenywa ngamaphoyisa asoSizweni kodwa bekungakaboshwa muntu ngawo.
Previous articleUbalisa ngesifo esihlasele iChiefs
Next articleUmzali uyavutha ‘kuhlazwa’ ingane yakhe